Lactose free milk လက်တို့စ်ဖရီး နို့မှုန့် – Mawlamyine Daily
Mawlamyine Daily	ကျန်းမာရေး, ဆောင်းပါး	 February 16, 20190Minutes
မော်လမြိုင်၊ ၁၆ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၉
၁။ ဆရာ သမီးလေးက ၆ လသမီးပါ။ ဝမ်းသ္ပားတာ အဝါရောင်ထဲမှာ အဖြူရောင်အစေ့ကလေးတ္ပေပါပါတယ်။ တနေ့ကို ၆ ကြိမ် ၇ ကြိမ်ပါတယ်။ ၁၅ ရက်နေ့က စပြီးပါတာပါ။ အဲဒီည ဆရာဝန်ပြတော့ ဆေးပေးပါတယ်။ photo ကို attached လည်းလုပ်ထားပါတယ် ဆရာ။ တနေ့ကို one capsule တိုက်ရပါတယ်။ ဒီနေ့ဆို ၄ ရက် ရှိပါပြီ။ မသက်သာသေးပါ။ သမီးကို Nestle NAN formula milk တိုက်ပါတယ်။ ပထမကလေး သားငယ်ငယ်တုန်းကလည်း အဲလို ဝမ်းသ္ပားဖူးပါတယ်။ အဲတုန်းက ဆရာဝန်က ISOMIL Soy ကို ခဏပြောင်းတိုက်ခိုင်းပါတယ်။ ဆရာဝန်ကိုမေးတော့ ဝမ်းသ္ပားတာ ၁၀ ရက် လောက်ကြာမှ ပြောင်းပါလို့ပြောပါတယ်ဆရာ။ ဘာလုပ်သင့်လဲ advice ပေးပါဆရာ။ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။ ရိုသေစွာဖြင့်။
၂။ ဆရာရှင့် ကျမသမီးအမွှာလေး အရင်လက ဝမ်းလျောလို့ ဆေးရုံဆယ့်နှစ်ရက်တက်လိုက်ရပါတယ်ဆရာ။ ဆေးရုံတက်တဲ့အချိန် lactose free တိုက်ခိုင်းပါတယ်ဆရာ။ ခုဆေးရုံဆင်းပြီး တပတ်ကျော်ပါပြီဆရာ။ သမီးလေးတွေကို တိုက်နေကြနို့မှုန့်ပြန်တိုက်လို့ရပြီလားဆရာ။ ပြီးတော့ဆန်မှုန့်ပြန်ကျွေးလို့ ရပြီလားသိချင်ပါတယ်ရှင့်။ lactose free က တနေ့တဗူးဝယ်ရတာခုဆို နှစ်သိန်းနီးပါးကုန်နေပါပြီဆရာ။ မတတ်နိုင်လို့ပါဆရာ။ သမီးလေးတွေ ငါးလပြည့်ပြီးပါပြီဆရာ။ ကျေးဇူးပြု၍ဖြေပေးပါအုံးရှင်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။
လက်တို့စ် နို့လက်မခံနိုင်တဲ့ ဝမ်းပျက်ရောဂါနဲ့ ကလေးအတွက် ဖြည့်စွက်စာတွေ ပို့လိုက်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ Lactose free နို့မှုံ့ကို ဘာလို့ အဲလောက်ဈေးကြီးသလဲ မသိပါ။ ယူအက်စ်မှာ ဒီလောက်သာရှိတယ်။
Lactose free milk လက်တို့စ်ဖရီးနို့မှုံ့
1. Lactaid Milk, 1% Milkfat, 64 Fl Oz $4.49
2. Lactaid Milk, 2% Reduced Fat, 64 Fl Oz $4.49
3. Horizon Organic Milk 1% Ultra Pasteurized, 64 Oz $4.89
4. Lactaid Whole Milk, 96 Fl Oz $6.49
5. Dairy Pure 2% Lactose Free Milk, 64 Fl Oz $3.79
Baby Formula ပုံမှန်နို့မှုံ့ဈေးနှုန်း
1. Enfamil Premium Infant Formula Powder – 12.5 oz. $16.99
2. Enfamil Gentlease Infant Formula, Milk-Based with Iron, Powder – 12.4 oz $17.99
3. Enfamil Premium Infant Formula Powder – 23.4 oz tub $25.99
4. Enfamil Premium Ready to Use Infant Formula, Newborn –6count, 12 fl oz box $5.99
5. Sensitive Organic Baby Formula – The Honest Company $32.95